Uchazekile ngoMchunu umqeqeshi weSharks - Impempe
Uchazekile ngoMchunu umqeqeshi weSharks
March 22, 2021 Impempe.com
Kwenzeke imbedumehlwana emdlalweni wokungcweka obuphakathi kwezivakashi iCell C Sharks neLions ophele kungu 43-40 ngoMgqibelo e-Emirates Airlines Park, eGoli.
Ngesikhathi uRasta Rashivhenge okunguyena obephethe lo mdlalo eyishaya indweba ethi uyawuqeda, utshelwe ukuthi cha, umdlalo awuphelile kepha kusasele imizuzwana eyisikhombisa.
Eqinisweni lapha abadlali bese bexhawulana ngoba ngokwabo lo mdlalo ubusuphelile futhi zombili izinhlangothi zikwamukela ukuthi zishayane zaze zabukana.
Konke lokhu kwenzeka nje zibambene ngobhongwane ayikho evuma ukugoba uphondo kwazise bekungu 40-40.
Akekho ongachaza ukuthi yini edale uRasta ukuthi aqede umdlalo kodwa ngemuva kokutshelwa ukuthi wenze iphutha, kuqhutshekiwe okuyilapho kuvele khona iphenathi kaTiaan Swanepoel okunqobe ngayo iqembu lasekhaya.
Ngemuva komdlalo umqeqeshi weLions u-Ivan “Cash” van Rooyen uthe okumjabulise kakhulu ukubona uswebezana lwakhe lusukuma luma ngezinyawo ngesikhathi iSharks ibuza imibuzo enzima ngasemaphethelweni omdlalo.
“Uma uzomkhipha ngaphandle uJannie (du Plesis) neminyaka yakhe, bonke abadlali abadlale imizuzu yokugcina (kwabaphambili) baneminyaka engu-23 noma ngaphansi.
“Kufana nesibusiso kumqeqeshi uma abafana osabakhulisa bazithola bebhekene nenselelo kodwa kugcine bona (kuyona).
“Yilokho nje okungijabulise kakhulu. Inhloso yale midlalo ukuthi sikhulise iqembu senze ngcono konke lapho sibona khona kunesidingo. Sikutholile konke lokho kuhamba newini ngakho ngineme kakhulu kusho uCash (u-van Rooyen).
BUKA: UNthuthuko Mchunu eshaya i-try ehlanyise ibhentshi leSharks
Umqeqeshi weSharks uSean Everitt akagxilanga kokuningi kodwa wachoma uphaphe lwegwalagwala umdlali wakhe waphambili uNtuthuko Mchunu.
“Ngabe ubuyile uBeast? Asazi (abaningi bafanisa uMchunu noTendai “Beast” Mtawarira).”
Lo mqeqeshi ubuze kanje ngemuva komdlalo esithangamini nabezindaba.
“UNtuthuko (Mchunu) ungishiye ngikhexile ngendlela adlale kahle ngayo. Sidlale kahle sonke kodwa uyena ongigqamelayo.
“Kubadlali abakhona eNingizimu Afrika akekho engimbona ekhula njengaye. Kuyona yonke imidlalo ulokhu ekhombisa okusha ngaye. Uyamangalisa.”
Previous Previous post: Avutha umlilo ongacisheki amaProteas abesifazane e-India
Next Next post: Isincengela umdlalo weSudan ngabadlali iBafana